Black Magic: မြန်မာစစ်တုရင် v1.0 For Android (Local + Online) [36.064 MB]
မြန်မာစစ်တုရင် v1.0 For Android (Local + Online) [36.064 MB]
Posted by Black Magic | Posted in Android Applications , Android Games | Posted on 11:31 PM
Google Play Store မှာ Download ဆွဲလို့ရပါပြီ..၊ မြန်မာစစ်တုရင် တစ်ခုထဲတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျား နဲ့ ဇယ်တောက်ခုံ လည်းပါပါတယ်..၊ Online မှာလည်းဆော့နိုင်ပါတယ်..၊ Myanmar Region Lock မို့လို့ မြန်မာနိုင်ငံကနေပဲ Down လို့ရမှာပါ..၊ နောက်မှ ဆက်ပြီးတော့ iOS , PC နဲ့ International Market မှာတင်ပေးမှာပါ..၊
Play Store ဝင်မရတဲ့သူတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက်ကတော့ အောက်က Link မှာ Down လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ..၊
Google Drive / [Miloshare (MyLink)]
Sittuyin v1.0 [BlackMagic].apk - 36.1 MB
Myanmar Sittuyin is an ancient chess game played in South East Asia, which looks similar to Chess but entirely quite different.
- Play3games Sittuyin, Checkers (Draughts) and Carrom in one APK.
- Beautifully rendered graphics!
- Play against AI or against other players online through our free-to-play cloud service.
- Switch between 2D and 3D.
- Tons of skins and graphic enchantments including War Chess-styled battle mode.